गुल्मीको गाउँमै २५ सय रुपैयाँमा स्नातक पढाई, सहुलियतमा शिक्षा र नि:शुल्क आवास बुधवार, माघ १५, २०७६
गुल्मीका कार्यपालिका सदस्य मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको जागिरे ! बिहिवार, माघ १६, २०७६
सम्झौता भएको एक दशकसम्म बनेनन् पुल, आयोजना कार्यालय र ठेकेदारको जुहारी शुक्रवार, माघ २४, २०७६
मर्ने बेलासम्म कि लास कि सास पाए हुन्थ्यो गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका ६ रुपाकोटका बालकृष्ण भण्डारी ३० बर्षदेखि बेपत्ता छन्। श्रीमति सावित्रा ३१ बर्षदेखि श्रीमानकै प्रतिक्षामा छन्। बालकृष्णले २८ बर्षको उमेरमा ०४५ सालमा बिहे गरेका थिए। त्यतिबेला सावित्रा १७ बर्षकी थिइन्। बिहे गरेको आठ दिनका दिन दुरान फर्काएर बालकृष्ण भारत गए। तीन बर्षसम्म तीन चिठी समेत पठाए। तर आफु फर्केर आएनन्। आइतवार, माघ २६, २०७६
नेताका गाउँका सडक, ४ दशकसम्म उस्तै करीब ३८ बर्ष पुरानो हो–रिडी–रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडक। यो बाटो भएर गुल्मी र बाग्लुङ्गका सयौ गाडी दैनिक आवतजावत गर्छन्। तर पहिलो पटक यो सडकमा यात्रा गर्नेले बाध्यताले बाहेक अर्को योजना सायदै बनाउँछन्। मंगलवार, माघ २८, २०७६
बिहेबाट फर्किदै गर्दा कुटपिट, एकजना सख्त घाईते इस्मा गाउँपालिका ४ कल्यारका ४० वर्षिय विष्णु गुरुङ कुटपीटबाट सख्त घाइते भएका छन्। छिमेकी ३२ वर्षिय गुमानसिहं गुरुङको कुटपिटबाट उनी घाइते भएका हुन्। शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६
कृषिमा रेसुङ्गा नगरको नयाँ योजना, किसानले खोज्नपर्दैन बजार रेसुङ्गा नगरपालिकाले कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा पूर्ण ग्यारेण्टी गरेको छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा पूर्ण ग्यारेण्टी गर्ने आफुहरु नेपालमै पहिलो स्थानीय तह रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाको दावी छ। यो कामले कृषि उत्पादनमा कृषकहरु थप आकर्षित भएका छन्। किसानले जति उत्पादन गरेपनि नगरपालिकाले उचित मुल्यमा खरिद गर्छ। तत्काल सड्ने बाहेक मुख्य कृषि उपजहरुमा एक क्विन्टलभन्दा बढि उत्पादन गरे कृषकलाई प्रति किलो दुई रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ। सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
गुल्मीमा जीप दुर्घटना : विद्युत प्राधिकरणका ७ जना घाइते गुल्मीको गुल्मी दरवार गाउँपालिका २ जुभुङको अर्थुङमा जीप दुर्घटना हुँदा सात जना घाइते भएका छन् । आइतबार तम्घासबाट जुभुङ जादै गरेको लु १ च ६७०१ नम्बरको जिप सडकबाट ५० मिटर तल खसेको छ । आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६
स्कुल सुधार्न संखुवासभाबाट गुल्मी पुगेका युवा गुल्मी–सङखुवासभाको मादी गाउँपालिका २ को गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए सूर्य कार्की। मादी गाउँका अधिकांश व्यक्तिहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा छन्। रोजीरोटीको लागि उनको परिवारसँग पनि त्यो बाहेक अर्को विकल्प थिएन। कार्कीले जेनतेन कक्षा ३ सम्म गाउँकै छत्रेश्वरी प्राविमा पढे। आइतवार, फाल्गुन १८, २०७६
बालबालिकाको पढाई रोकेर बाल मन्दिरमा बिहेभोज ! गुल्मी सदरमुकामको मुटु अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगाडीकै बाल मन्दिरमा बालबालिकाको पढाई स्थगित गरेर बिहेको भोज सञ्चालन गरियो। बुधवार, फाल्गुन २१, २०७६
राजनैतिक चंगुलमा सालझण्डी–तम्घास सडक, दलका नेताले दिएनन् चासो गुल्मी–दलहरुको राजनैतिक प्रतिशोधका कारण रुपन्देहीदेखि गुल्मी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग भनिएको महत्वपूर्ण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। गुल्मीबाट सबैभन्दा छिटो तराई जोडिने र सुरक्षित मानिएको सालझण्डी–पटौती खज्र्याङ–तम्घास–ढोरपाटन सडकको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। बिहिवार, फाल्गुन २९, २०७६
गुल्मी पनि ‘लक डाउन’ गर्ने जिल्ला प्रशासनको निर्णय गुल्मी-जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले विश्वमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार पौडेलले यो निर्णय अगाडि स्थानीय तहसंगै सर्वदलीय सर्वपक्षीय परामर्श गरेका थिए। सोमवार, चैत्र १०, २०७६
अन्यौलमै छन् गुल्मीका प्रशासन र स्थानीय सरकार, सदरमुकाममै छैन क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसन जिल्लाकै सदरमुकाम तम्घासमा क्वारेन्टाइन छैन। आइसोलेसन हाउस परैको कुरा। स्वदेश तथा परदेशबाट आएकाहरुको लर्को गाउँ पुग्यो। उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कसैलाई जानकारी छैन। रिडीबाट प्रवेश गरेका आधा गुल्मेली तम्घास भएर पश्चिमका गाउँ पुग्छन्। क्वारेन्टाइन र चेकजाँचको राम्रो व्यवस्थापन सदरमुकाममा नभएका कारण गाउँमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। मुख्य नाका रिडी र सदरमुकाममै चेकजाँचको राम्रो व्यवस्था नभएपछि गाउँ झनै बिजोगको स्थितिमा रहेको इस्मा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख विमला खत्रीले बताइन्। सोमवार, चैत्र १०, २०७६
गुल्मीमा एक हप्तासम्मका लागि कर्फ्यू गुल्मी– विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस (कोविड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी गरेको छ। मंगलवार, चैत्र ११, २०७६
गुल्मीमा बने ४ सय भन्दा बढी क्‍वारेन्टाइन वेड, तर विदेशबाट आएका घरमै गुल्मीका स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माणको लहर चलेको छ । जिल्लाका दुई नगर र १० गाउँपालिकाका मध्ये गुल्मी दरवार गाउँपालिकाले बाहेक शनिबारसम्म चार सय एक क्वारेन्टाइन बेड निर्माण गरिएको छ । सोमवार, चैत्र १७, २०७६
गुल्मीमा नेपाल बाहिरबाट साढे १७ सय आए, क्‍वारेन्टाइनमा ५५ जना मात्रै गुल्मीमा नेपालबाहिरबाट आएका अधिकांश घरमै भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म १२ वटै स्थानीय तहमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसहरुको संख्या एक हजार सात सय २४ रहेको छ। सोमवार, चैत्र १७, २०७६
एम्बुलेन्स चालकको प्रश्न : बिरामी बोक्ने हामी कहिलेसम्म असुरक्षित ? गुल्मी- केही दिनअघि गुल्मी दरवार गाउँपालिका ५ का एक युवा ज्वरोले थलिए । परिवारले एम्बुलेन्सलाई खबर गरे तर चालक आउन मानेनन् । एकपछि अर्काे एम्बुलेन्सलाई बोलाउँदा सबै चालकहरु ज्वरोको विरामी भएकाले कोरोना भाइरसको आशंका गर्दै तर्किए । बुधवार, चैत्र १९, २०७६
अलपत्र मजदुर उद्धार गर्दै स्थानीय तह, गुल्मीको मालिकाले घर पठायो सल्यानका मजदुर गुल्मी–मालिका गाउँपलिकाले अलपत्र परेका सल्यानका मजदुरहरुको उद्धार गरेर पठाएको छ । बाग्लुङ्ग हटिया स्थित दरमखोलामा निर्माणाधिन राजा पुलमा काम गरिरहेका सल्यानका १० जना मजदुरलाई उद्धार गरेर सल्यान पठाइएको मालिका गाउँपालिका प्रमुख रित बहादुर थापाले बताए । शनिवार, बैशाख ६, २०७७
पुलसँगै स्थानीयका आशा बगे, डिजाइनमै गुनासो गुल्मी–सचिना कार्कीको पक्की पुल तरेर नयाँ कक्षा आउने रहर पनि पूरा भएन । उनी झेदीबाट झोलुङ्गे पुल तरेर महेन्द्र आर्दश मावि वामी पुग्छिन् । अहिले कक्षा ८ को परिक्षा दिएर कार्की घरमै छन् । पुल बन्न थालेपछि पनि सचिनाले दुई वटा बार्षिक परिक्षा दिइन् । तर पक्की पुलबाट बडिगाड नदि तर्ने सपना पुरा भएन् । गत साल नयाँ बर्षकै दिन पुल ढल्यो । भने अहिले पनि बाढिले पुल बगायो । ‘पुलमा काम गर्नेले नयाँ कक्षा नयाँ पुलबाट भनेर जिस्क्याउँथे, खुसी भएर बिद्यालय आउजाउ गथ्र्यौ,’कार्कीले भनिन,‘बैशाखमै पुल तर्ने सपना बगे ।’ शुक्रवार, बैशाख ५, २०७७
गुल्मी अदालत न्यायाधीशविहिन, आदेश पुनःविचार नहुँदा समस्या गुल्मी–गुल्मी जिल्ला अदालत दुई महिनादेखि न्यायाधीश बिहिन भएको छ। गुल्मी जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल सरुवा भएर फागुन १८ गते रुपन्देही गए। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट गुल्मी सरुवा भएका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती एक महिनादेखि आएका छैनन्। सरकारवादी फौजदारी मुद्धामा प्रतिवादी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने, कसैलाई जरुर पक्राउ गर्नुपर्ने भए समर्थन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने काम न्यायाधीशको हो। त्यो संगै जिल्ला न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमणलाई मध्येनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ थप जिम्मेवारी दिएको छ। मंगलवार, बैशाख ९, २०७७